မိမိတို့ရဲ့ iPhone & iPad များ ပျောက်ဆုံးခဲ့ရင် ဘာတွေ လုပ်ထားသင့်သလဲ ?
Indsendt af itnadamtui kl. 21.51 Ingen kommentarer:
Unicode ကို ပြောင်းကြပါစို့
Contacts တွေကို Zawgyi မှ Unicode သို့ ပြောင်းမယ်ဆိုလျှင် …
– UniZG Apk နဲ့ ပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။
( Download Link : http://bit.ly/2mEjDD0 )
– mmUniToolkit Apk နဲ့ ပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။
( Download Link : https://bit.ly/2k3Nkw6 )
– Connect MUX Apk နဲ့ ပြောင်းလို့ ရပါတယ် ။
( Download Link : https://bit.ly/2jZ1MW6 )
– MCF MUX Apk နဲ့လည်း ပြောင်းနိုင်ပါတယ် ။
( Download Link : https://bit.ly/2m3QXCY )
*SMS Messages တွေကို မှန်ကန်စွာနဲ့ ဖတ်နည်း / ပို့နည်း*
လာမယ့် October ( ၁ ) ရက်နေ့ကျလျှင် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Operators တွေ အားလုံးက Unicode စနစ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုကြတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ လက်ရှိမှာဆို MPT က သူတို့ရဲ့ MPT 4U Apk နဲ့ Messages Reply တွေမှာ Unicode စနစ်ကို ပြောင်းလဲ အသုံးပြုနေပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါကြောင့် နောက်တစ်ရက်နှစ်ရက်ဆိုလျှင် Messages အတွက် ခေါင်းစားနေရတာတွေ အကုန် ပြီးသွားပါလိမ့်မယ် ။ အခုလောလောဆယ်မှာတော့ …
– MyanSms Apk ကို Default SMS Messages အဖြစ် အသုံးပြုန်ုင်ပါတယ် ။
( မိမိဆီ ပို့လာတဲ့ Zawgyi SMS မှန်သမျှကို အလိုအလျှောက် Unicode ကို Convert ပေးပါမယ် ။ )
( Download Link : https://bit.ly/2kyPF2r )
– MCF MUX Apk ကိုလည်း Default SMS Messages အဖြစ် ပြောင်းလဲ အသုံးပြုလို့ ရပါမယ် ။
( ဒီ App က Messages Apk အနေနဲ့ အသုံးပြုနိုင်ရုံ မဟုတ် ။ Zawgyi နဲ့ ပို့လာတဲ့ SMS တွေကို ဖတ်လို့ရသလို ၊ မိမိက ပြန်ပို့တဲ့အခါမှာလည်း Zawgyi နဲ့ ပို့မလား ? Unicode နဲ့ ပို့မလား ? ဒါမှမဟုတ် နှစ်မျိုးစလုံး Dual နဲ့ပဲ ပို့မလား ? ရွေးချယ်ပေးလို့ ရပါမယ် ။ မိမိဖုန်းထဲက Contacts တွေကိုလည်း Zawgyi ကနေ Unicode ကို ပြောင်းလို့ ရပါမယ် ။ နောက်ပြီး Note ထဲက Texts တွေကိုလည်း Convert လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ Converter ပါပါမယ် ။ )
*သုံးနေကြ Keyboards တွေနဲ့ Unicode ရိုက်နည်း*
အချို့ယူစာတွေက ချက်ချင်း Unicode လက်ကွက်နဲ့ အသားကျဖို့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်တောင်မှ မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ။ အခုမှ သုံးရင်း သုံးရင်း အဆင်ပြေ ချောမွေ့လာတာပါ ။ အခုမှ စသုံးကြည့်မယ့် သူတွေ ၊ Unicode လက်ကွက်နဲ့ အသားမကျသေးလို့ စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်နေတဲ့သူတွေအနေဖြင့် ZawDeCode လက်ကွက်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ။ အဆိုပါ ZawDeCode လက်ကွက်က Zawgyi ရိုက်သလိုပဲ ရိုက်ရမှာပါ ။ ပါတ်ဆင့်တွေ ရိုက်ရင်လည်း Zawgyi ရိုက်သလိုပါပဲ ။ ( Unicode လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နည်းလေးကိုလည်း မကြာမကြာဆိုသလို လေ့လာပြီး လေ့ကျင့်စေချင်ပါတယ် ။ )
တကယ်က Unicode လက်ကွက်ဆိုတာက စိတ်ပျက်ဖို့ကောင်းတဲ့ နည်းစနစ် မဟုတ်ပါဘူး ။ ငယ်ငယ်က ကျနော်တို့ သင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ မြန်မာစာ ရေးထုံးနည်းအတိုင်း ရိုက်ရတဲ့ လက်ကွက်စနစ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဥပမာဗျာ ” မြ ” ဆိုတာကို ကျနော်တို့ စာအုပ်မှာ ချရေးမယ်ဆိုပါက ” မ ” ကို အရင်ရေး ၊ ပြီးမှ ” ရရစ် ” ကို ဆွဲရတာ မဟုတ်လားဗျ ။ အခု Unicode လက်ကွက်မှာလည်း အာ့လို ရိုက်ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ ပါတ်ဆင့်တွေကို ရိုက်မှသာ ” ဝိရာမ ” လို့ခေါ်တဲ့ Unicode လက်ကွက်ထဲက ( အစက်လေးနဲ့ ဝလုံးအောက်က အပေါင်းလေး ) ဒါလေးကို နှိပ်ပေးပြီး ရိုက်ရမှာပါ ။ ဥပမာပေါ့ ” မင်္ဂလာပါ ” ကို ရိုက်မယ်ဗျာ ။မင် ပြီးရင် ဝိရာမကိုရိုက် ၊ နောက် ဂလာ ( မရေးငသတ် ၊ ပြီးလျှင် ဝိရာမ ( အစက်လေးနဲ့ ဝလုံးအောက်က အပေါင်းလေး ) ကိုရိုက် ၊ ဂငယ်ကို ရိုက် ၊ ဒါဆို Auto ( မင်္ဂ ) ဖြစ်ပြီ ။ ကျန်တဲ့ လာကို ရိုက်လိုက်တော့ မင်္ဂလာပါပေါ့ ။
ပြောတော့တာ ခက်တယ် ရှုပ်တယ် ထင်ရတာ ။ တကယ်ရေးကြည့်တော့ လွယ်လွယ်လေးရယ်ဗျ ။ ကျနော်ဆို တစ်ပါတ်ပဲ ရှိသေးတယ် ။ အဲဒီ Unicode လက်ကွက်နဲ့ ရိုက်နေတာ ။ အခုဆို Zawgyi နဲ့ ရိုက်တုန်းကလိုပဲ မြန်မှမြန်ပဲ ဖြစ်နေပြီ ။
*ဘယ် Keyboards တွေကို အသုံးပြုရမလဲ*
အများကြီး ရှိပါတယ် ။ လက်လှမ်းမှီတာလေးတွေကို ပြောပြပါမယ် ။
– TTKeyboard ပါ ။
( ZawDeCode နဲ့ Zawgyi ရိုက်သလို ရိုက်လို့ရသလို ၊ MyanSan နဲ့လည်း Unicode လက်ကွက်အတိုင်း အသုံးပြုနိုင်ပါမယ် ။ Voice Control ကိုလည်း အသုံးပြုလို့ ရပါမယ် ။ မြင်သမျှ တွေ့သမျှ Zawgyi စာတွေကိုလည်း Keyboard ပေါ်က ခလုတ်လေးကို တစ်ချက်နှိပ်ပြီး Unicode ကို ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ် ။ Texts တွေအပေါ် Cursor လေး ချပေးဖို့ပဲ လိုအပ်တာပါ ။ ကျနော့်အကြိုက်ဆုံး Keyboard လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ iOS ပေါ်မှာရော , Android ပေါ်မှာပါ ဒီကီးဘုတ်လေးကိုပဲ သုံးပါတယ် ။ )
( Download Link : http://bit.ly/2kxkUuK )
– Frozen Keyboard2 ပါ ။
( Zawgyi လက်ကွက်ဟောင်းနဲ့ ရိုက်လို့ရသလို ၊ Unicode လက်ကွက်နဲ့ပါ ရိုက်လို့ ရပါမယ် ။ Zawgyi နဲ့ ရိုက်ထားတဲ့ စာတွေကိုလည်း Copy လုပ်လိုက်တာနဲ့ အလိုအလျှောက် Unicode ကို Convert လုပ်ပေးပါမယ် ။ )
( Download Link : https://bit.ly/2m2FELh )
– GBoard Keyboard
( နာမည်ကျော် Hand Writing တို့ ၊ Voice Control တို့ ပါဝင်ပါမယ် ။ သူ့မှာတော့ Unicode လက်ကွက်ကိုပဲ Support လုပ်ပါမယ် ။ )
( Download Link : http://bit.ly/2k8yTXO )
– Manic Myanmar Unicode Keyboard2
( သူ့မှာလည်း Frozen Keyboard လိုမျိုး Zawgyi နဲ့ ရေးထားတဲ့ စာတွေကို Unicode ကို အလိုအလျှောက် ပြောင်းပေးမယ့် Convert Feature ပါပါတယ် ။ )
( Download Link : http://bit.ly/2m4Er6l )
Unicode ကို ကူးပြောင်းပြီးသူတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ အခုမှ ကူးပြောင်းဖို့ ကြိုးစားနေသူ ( စိတ်ဝင်စားသူ ) မည်သူမဆို အခု ကျနော်ပြောပြတဲ့ Keyboards လေးတွေကိုပဲ ဆောင်ထားရင် ရပါပြီ ။
iOS 13 မှာ Unicode ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Zawgyi ပဲဖြစ်ဖြစ်ကို Setting ထဲမှာ Change ဖို့ Built-in ပါလာပါပြီ ။ Setting >> General >> Language & Region ကို ဝင်ပြီး Add new language မှာ Burmese ကို ရှာပြီး နှိပ်လိုက်ပါ ။ အာ့ Burmese ထဲကိုပဲ ဝင်ပြီး အပေါ်က Standard ကို Select လုပ်ရင် Unicode ကို အသုံးပြုတာပါ ။ အောက်က Zawgyi ကို Select လုပ်ရင်တော့ Zawgyi ကို ရွေးတာပါ ။ ပြီးရင် ပေါ်လာမယ့်ဟာက အရေးကြီးပါတယ် ။ ဒီနေရာမှာ သေချာ ဖတ်ပါ ။ Prefer English ကို ရွေးပြီး နှိပ်လိုက်ရင် ဖုန်းရဲ့ Settings တွေ ၊ Date & Time တွေက မူလ English စာလုံးတွေနဲ့ ပြသပေးမှာပဲဖြစ်ပြီး ၊ Prefer Burmese ကို နှိပ်လိုက်လို့ကတော့ ဖုန်းရဲ့ Settings ရော ၊ Date တွေရော ၊ Time တွေရော အကုန် မြန်မာလို Change သွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် ။ သေချာ ဖတ်ပြီးမှ နှိပ်ပါ ။
Fb ပေါ်မှာရော ၊ Messenger မှာရော Zawgyi ဖြစ်ပါစေ Unicode ဖြစ်ပါစေ အကုန် အမှန်မြင်ရပါတယ် ။ အဲ သုံးနေတဲ့ ယူစာက မြန်မာပြည်မှာ ရှိနေဖို့ပဲ လိုတာပါ ။ အဲဒါက Fb ရဲ့ Auto Converting System ကြောင့်ပါ ။ ဇော်ဂျီစာလည်း ဖတ်လို့ ရပါမယ် ။ ယူနီစာကိုလည်း အမှန်တိုင်း မြင်ရပါမယ် ။ အမှန်တိုင်း မမြင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ ဒီလိုလေး လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ ။ မိမိ၏ Fb Account ကနေ Log out လုပ်လိုက်ပါ ။ အဲဒီနေရာမှာ အခြား Account အသစ်တစ်ခုကို ခေတ္တ Sign in လုပ်လိုက်ပါ ။ Messenger ထဲကိုလည်း Account အသစ်နဲ့ပဲ ဝင်လိုက်ပါ ။ ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ အဆိုပါ Account အသစ်ကို Log out လုပ်ပြီး မူလ Account အဟောင်းကိုပဲ ပြန်ပြီး ဝင်လိုက်ပါ ။ Messenger ကိုလည်း အလားတူ အကောင့်အဟောင်းနဲ့ပဲ ပြန်ဝင်ပေးပါ ။ ပြီးရင်တော့ ဖုန်းကို Restart လုပ်ပေးလိုက်ပါ ။ ပြန်တက်လာရင် Fb ပေါ်မှာရော ၊ Messenger မှာပါ Zawgyi စာ ၊ Unicode စာတွေကို အမှန်အတိုင်း မြင်နိုင် ဖတ်နိုင်ပါပြီ ။ တစ်ခါထဲနဲ့ မမှန်သေးရင် ၂ ခါ ၊ ၃ ခါ လုပ်ကြည့် ။ Auto Converting ဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းတော့ စောင့်ရပါတယ် ။
iOS 13 ၏ Built-in Keyboard မှာ Unicode မြန်မာစာ Keyboard ကိုထည့်သွင်းချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Setting >> General >> Keyboard >> Keyboards >> Add New Keyboard >> Burmese ကို Select လုပ်ပေးလိုက်ရပါမယ် ။
ဒါဆို iOS 13 ၏ Built-in Keyboard မှာ Unicode မြန်မာစာ Keyboard ကို ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်လို့ အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ ။ ဒါမှမဟုတ် အရင်က အသုံးပြုနေကျ Keyboard ကိုပဲ သုံးချင်တာဆိုရင်လည်း ရပါတယ် ။
*Contacts တွေကို Zawgyi မှ Unicode သို့ ပြောင်းနည်း*
– Pyaung App ကို အသုံးပြုပြီး ပြောင်းပါ ။
( Download Link : https://apple.co/2jZa14u )
အပေါ်က Pyaung App နဲ့ ပြောင်းမရလျှင် Contacts တစ်ခုချင်းစီကို ဝင်ရောက်ပြီး Edit ကို နှိပ်ကာ TTKeyboard ပေါ်က Converting ခလုတ်လေးရဲ့ အကူအညီနဲ့ ပြောင်းပါ ။
တစ်ဖက်က Unicode ကို အသုံးပြုနေတဲ့သူဆိုလျှင် မိမိဖက်မှ မည်သို့မှ ပြုလုပ်စရာ မလိုအပ်ပါ ။ ဒါမှမဟုတ်ပဲ တစ်ဖက်က Zawgyi အသုံးပြုတဲ့သူဆိုလျှင်တော့ ပို့လာတဲ့ SMS ကို Tap ပြီး Copy ကို နှိပ်ကာ TTKeyboard ရဲ့ အကူအညီနဲ့ Convert လုပ်ပြီး ဖတ်ရပါမယ် ။ Operators တွေရဲ့ အဝင်စာတွေကတော့ လာမယ့် အောက်တိုဘာ ( ၁ ) ရက်နေ့ကျလျှင် အကုန် အဆင်ပြေပါပြီ ။
– TTKeyboard App တစ်ခုထဲနဲ့ပဲ လုံလောက်ပါတယ် ။
( Download Link : https://apple.co/2lBJcUw )
Indsendt af itnadamtui kl. 19.07 Ingen kommentarer:
Syncios Free Download |
Menu juli (5) august (62) september (178) oktober (167) november (91) december (47) januar (28) februar (44) marts (45) april (31) maj (16) juni (4) juli (6) august (7) september (5) oktober (3) november (2) december (1) januar (1) juni (9) juli (2) august (3) september (2) november (5) april (1) maj (1) september (4) oktober (3) november (1) januar (2) maj (1) oktober (3) november (2) juli (5) september (1) november (1) september (11) oktober (1)
Myanmar zawnyi font